Gumaadka lagu hayo shacabka somaliyeed
2 October 2010 SMC walalayaal waxa xamar gumaad ah oo ka dhacaya oo ay geysanaya ciidamada aminson waa wax laga naxo walaahi. walalayaal ciidan sheeganaya in ay yihiin ciidan nabadeed hadana gumadaya shacabka si naxariis daro ahna ugu garaaca madaafiic goobo ay ku nool yihiin dad shacab ah maamulka xamar ka jirana ka aamusan yahay ayaa waxay tahay arin layaableh, haduu ka hadlana maamulkaas xamar ka jira gumaadka loogeysanayo shacabka ayaa waxay tahay wax laga naxo ,oo waxa ku cadaneysa ciidamadaas dad muslinka ah ee somaliyeed leynaya iyo maamulka meesha ka jira in aysan kala duwaneyn.
Madaweynaha sheegta in uu yahay madaxweyne somaliyeed ee hagoogan cimamad dineed, miyeynaan u jeedin in uu yahay nin lagu fariisiyey meesha talona aysan kasoo fulin, dulmiga shacabka loogeysanayana uu daawanayo raalina ka yahay. walaalayaal waa dadka damiir somaliyeed ee dhab ah ku jirto kuna dhisba sheegta diinta islamka,waxaan idiin sheegaya waxa dulmi ah ee loogeysanayo walaalihiina iyo gumaadka uu ku hayo cadowga aan u dhalan dalka in nin walba maalin la weydiin doono ama ku farax waxa lagu hayo umad aan wax geysan in la gumaado ama sababo been ah u samee in dad guryahooda joogo in madfac lala dhaco maalin iyo habeen.
waxa ninkastoo somali ah oo madax ah ama shacab ah uu galaya god hal mitir ah maalin aan fogeyn waana la idin weydiin doona aad ku tageerteen in la gumaado umad muslin ah oo aan wax danbi ah geysan. walalayaal ciidamadan amison waa ciidamo og al-shabab meelaha ay xamar ka jogaan , maxay u leynayaan shacabka oo madaafic aan qiyaas laheyn ugu garacayaan meelo aan xata dagaalka ka soconin. walalayaal waxa la gumadaya waa walalihiin ee aad kula abtirsataan magac somaliyeed ama manhaj dineed oo marna qiil malihid wax aad uga aamusto waxa loogeysanayo walaalaha,waana arin qofkii damiir leh uu ka danqan karo.
Walaalayaal kuwo idinka mid ahi waxay oran donaan al-shabab ciidan ajnabi ah ayaa la safan ,jawaabtuna waxay tahay quraanka kariimka ee aan aaminsanahay ayaa waxa uu qaba hadii umad muslin ah weerer ay gaalo kusoo qaado in ay u banaan tahay umadaas in ay kaalmeystaan walaalahood ee muslinka la ah.
Su-aashu waxay tahay marka ciidamadan amison yaa tageera sidaase kusoo galeen wadanka !
Waxaan u maleynaya jawaabtan akhristaha maqaalkan in aan u reebo ,si uu isku weydiiyo ciidamadan xage sal kuleeyihiin yaase tageera maxaase maslaxad oo laga lee yahay.
Walalayaal maalin kastoo gudubta waxa laleynaya waa umad somaliyeed oo dhiigooda la baneystey oo aysan qofna ka qarsoneen cida danbiga geysata kuna garaacda madaafiicda shacab aan wax galabsan.
Walalayaal dalkan maaha dal xor ah waana dal laga maamulo Ethopia iyo kenya iyo dowladaha reer galbeedka. walalayaal somaliya taariikhdeeda hadaad baartan waxaa idin cadaneysa in somaliya waligeed loo gumeeyey Ethopia iyo kenya oo ah dowlado daris la ah somalia , waxa keenayana waa cadahay oo waa dowlado gaalo ah somaliana waa dal muslin ah 100% isku luqad ah isku dhaqan ah dalweyn oo barwaaqo badana hesta iyo somaliyoo meel istiraatiji ah ku taal.
walalayaal halgamayaashii dalkan usoo halgamey nin aan Ethopia dagaal la galin kuma jiro ,walalayaal goormaan hurdada ka kici doona oo aan xaqeena ka dhacsan doona cadow si bareero ah u gumaadaya shacabka somaliyeed ,isagoo ka helaya kaalmo xoogan dalal reer galbeed ah.
waxaa intaas oo dhan kasii daran maamulada sida Somaliland iyo Puntland kama madax banaana amarkutaagleynta Ethopia , nin aan Ethopia ku xirneyn madax kama noqdo nin aan iyaga soo marina umadeena ma maamulo ee ilaheybaan idinku dhaariya soo hadalkii Sayid maxamed cabdule xasan meesha kama muuqato goortuu yiri war hadaad muslin tihiin maxa idinka dhigay sidan waxa kaloo uu yiri sayidkii alaha u naxariiste war hadaad dalkan lee dihiin maad idinku maamulataan. hadaladan ayaa waxay kusoo beegmeen waqti somaliya gumeyta uu heystey oo ay somaliduna kala daadsaneed.
walaalayaal waa in aanu wax ku yeelano bari hadey shaley ay iyagu lahayeen, waa in aanu hurdada ka kacna oo aan dulmi danbe aynaan ka gaabsan,war diinta aynu sheeganeyno ma sidatan ayey raali ka tahay oo in dulinimo aan ku nolaano ayaan camal ka dhiganay.
Dowlad ku sheega xamar ka jirta nama matasho ee wixii marka hore noo keeney ayaa hadana xoog iyo dhiig umad somaliyeed loo geysto ku haya booskeeda ee waxaan kula talin laha shriifka in uu is casilo . waxaan kaloo Puntland iyo somaliland kula talin laha in ay siyaasadooda xor u noqdaan ee daba orodka Ethopia ay ka waantoobaan, waa hadii ay waanadu wax tar lee dahay. shacabka somaliyeedna uu u istaago dantiisa oo uusan ku haleyn reg dusha nalooga keeney sida shariif oo kale .
Dr ali warsame yusuf2pac@hotmail.com